Ụgbọ ala anyanwụ: àgwà, otú o si arụ ọrụ na ike | Green Renewables
Portillo nke German | 04/11/2021 10:53 | Teknụzụ ọhụrụ
El ụgbọ ala anyanwụ Ọ bụ nke nwere moto eletriki nwere ike inweta ume iji rụọ ọrụ site na igwe anyanwụ nke etinyere n'elu ahụ ya dum. Ụgbọ ala anyanwụ ndị a nwere mmepe teknụzụ na-arụ ọrụ nke ọma na enwere ike mara ya n'ahịa.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ ala anyanwụ, ihe njirimara ya na nkà na ụzụ ọ na-ebu.
1 Ụgbọ ala anyanwụ
2 Enwere ike ịza ajụjụ
3 Batrị anyanwụ
4 Ụfọdụ oru ngo
5 Enwere ike ịzụ ụgbọ ala anyanwụ?
Ọ bụ ụgbọ ala nke nwere moto eletrik na-enweta ike site n'ọkụ anyanwụ etinyere n'elu ahụ dum nke ụgbọ ala ahụ. N'ụzọ bụ isi, ha bụ ụgbọ ala eletrik n'akụkụ niile metụtara ọrụ ha na usoro mkpali, na ọdịiche ha dabere naanị na isi iyi nke ike eletrik. Ha ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ụgbọ ala anyanwụ, nke bụ ụgbọ ala ndị na-enweta ọkụ eletrik site na ike anyanwụ na-esite na mpụta nke ụgbọ ala ahụ.
Mkpụrụ ndụ anyanwụ etinyere n'ime ụgbọ ala ndị a na-agbanwe ike anyanwụ ka ọ bụrụ ike eletrik, nke enwere ike ịchekwa na batrị ma ọ bụ jiri ya mee ihe ozugbo na injin. Na omenala, a na-ama ụgbọ ala anyanwụ maka nnwere onwe ha dị ala, n'otu akụkụ n'ihi na ọ na-esiri ike ịbawanye arụmọrụ nke oghere anyanwụ na e mere atụmatụ ha iji belata ikuku ikuku.
Ọzọkwa, Ọtụtụ ihe nlere anya bụ nke ejiri ihe dị mfe mepụta ma rụpụta ya iji kwalite arụmọrụ ike zuru ezu. Ma na ọkara okwu, e nwere ugbua prototypes na oru ngo na-eweta anyanwụ ụgbọ ala n'ahịa.
Enwere ike ịza ajụjụ
Dị ka anyị kwuburu, ụgbọ ala anyanwụ na-enweta ike anyanwụ site na ogwe arụnyere n'elu ha ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ike eletrik maka nchekwa na ihe a na-akpọ cell cell. Ike eletrik a na-eme ka injin ụgbọ ala dị ka ụdị ụgbọ ala eletrik ọ bụla ọzọ.
Nsogbu na-amalite ebe a, n'ihi na Ajuju enwere ike nke ụgbọ ala anyanwụ na-adabere 100% na ike anyanwụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Otu n'ime ha bụ ike dị ala nke oghere anyanwụ. N'ezie, mkpụrụ ndụ fotovoltaic anyanwụ kachasị arụ ọrụ ugbu a gafere 26% ma na-atụ anya iru 29% n'ime afọ ole na ole.
Kedu ihe ọ pụtara? Ịchaji batrị nke anyanwụ na-achọ ebe dị ukwuu nke ogwe ọkụ dị elu nke ọma. Igwe ọkụ eletrik na-arụ ọrụ mgbe niile karịa nhọrọ combustion ọ bụla, ma na nke a (na mmalite nke ọkụ eletrik) anyị nwere mwepu nke ike ike kwa unit nke uka (ọnụọgụ nke ike wepụtara site na kilogram ọ bụla nke mmanụ ụgbọala), dị anya. ka mma na mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ dizel nhọrọ.
Akụkụ ọzọ bụ ịdabere na anyanwụ iji chajịa batrị. Nke a doro anya, ma dabere na obodo na latitude, nke a ga-abụ ezigbo ibu ụgbọ ala ndị a kwa ụbọchị, ọ bụrụhaala na ha enweghị ụzọ ọzọ ha ga-esi chajịa batrị, dị ka plọg ọdịnala nke ụgbọ ala eletrik.
Obi abụọ adịghị ya na echiche nke ịnweta ụgbọ ala ndụ ndụ nke ike anyanwụ kwadoro na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ ihe dị ka nkwado, nkwanye ùgwù maka gburugburu ebe obibi, akụ na ụba ma ọ bụ ihe ọhụrụ. Agbanyeghị, ewezuga ụfọdụ ọrụ ogologo oge na-akọwapụtaghị nke ọma. , Ike anyanwụ bụ Ngwa kachasị mma n'ime ụgbọ ala bụ ihe mgbakwunye ike maka sistemu ike dị ka njikwa ihu igwe, ọkụ ọkụ ma ọ bụ sistemụ mgbasa ozi.
Ụfọdụ oru ngo
Ewezuga ụwa ịgba ọsọ, nke bụ eziokwu bụ na teknụzụ fotovoltaic cell bụ ihe a na-adịghị ahụkebe ugbu a na ahịa ụgbọ ala. Isi ihe mgbochi bụ ọnụ ahịa dị elu iji mejuputa teknụzụ a na ụgbọ ala, na-amachi nha nke ụgbọ ala na ọnụ ọgụgụ nke panels nwere ike itinye na oke na ọsọ a ga-enweta.
Ọtụtụ ọrụ ụgbọ ala eletrik na-arụ ọrụ anyanwụ na-agbalị ime ka ndị na-azụ ahịa zụta n'ime ya. Nke kacha dọtara mmasị bụ Lightyear One, nke nwere oke ihe karịrị narị kilomita asaa. Ọ na-eji sel fotovoltaic. Dị ka ndị mmepe ya si kwuo, cell fotovoltaic a nwere ike ịchekwa 700% ume karịa batrị omenala ma rụọ ọrụ n'adabereghị, ọ bụ ezie na akụkụ nke ahụ bụ na ha nọ na ndò.
Ọnụahịa ya bụ euro 150.000, nke dị anya site na ịbụ nhọrọ dị mma maka ọtụtụ ndị mmadụ, mana ohere nke teknụzụ gị nke ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na-eji nwere ike imeghe ebe ndị na-adọrọ mmasị.
Nzọ ọzọ siri ike bụ Sono Sion, nke na-eji mkpụrụ ndụ anyanwụ 248 kesara n'ahụ niile iji nyekwuo kilomita 34 nke njem ụgbọ mmiri maka kilomita 250 ruru na chaja batrị. Ọnụ ahịa ahịa ya bụ euro 25.500.
Enwere oru ngo ndị ọzọ nwere olile anya na a ga-enweta ya nke ọma yana ihe isi ike itinye ego tọhapụrụ ya. Nke a bụ ihe gbasara Spanish «mö», ụgbọ ala ime obodo nwere oche abụọ nwere ọnụ ahịa dị ka euro 5.000, nke kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na a kwụsịrị ọrụ ahụ n'ihi enweghị ike imepụta ngwaahịa mbụ ya.
Enwere ike ịzụ ụgbọ ala anyanwụ?
Ọ bụ ezie na ohere ọha na eze na-enweta ụgbọ ala nke anyanwụ bụ eziokwu dị anya, ike anyanwụ nwekwara ike ịkwado njem na-adịgide adịgide site na nhọrọ ndị ọzọ. Ụgbọ ala ndị na-ebu anyanwụ bụ ụgbọ ala ndị ahụ na-enweghị oghere fotovoltaic n'elu nke ha na ha na-akwaga n'ihi ọkụ eletrik na-emepụta site na mbara igwe nke dị na akụrụngwa dị n'èzí (ma ọ bụ elu ụlọ, ebe a na-adọba ụgbọala, wdg).
Enwekwara nhọrọ, nke ejirila n'ọtụtụ ụdị azụmahịa, na-etinye oghere anyanwụ n'elu ụlọ nke eletriki ma ọ bụ ụgbọ ala ngwakọ dị ka usoro nkwado. Ogwe ndị a dị anya na-enwe ike ịkwagharị ụgbọ ala, ma ha nwere ike inye ike achọrọ, dị ka iji ikuku oyi.
Ka ọ dị ugbu a, ntinye nke fotovoltaic panels na ụgbọ ala egosighi na ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka nsogbu nke dochie mmanụ ọkụ, ma ha nwere ike ịkwado usoro ndị ọzọ. Dị ka ebe ikpeazụ, ọdịnihu nke njem na-adịgide adịgide ga-agụnye ịghọta otu esi eji teknụzụ ọ bụla dị ọcha mee ihe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụgbọ ala anyanwụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Teknụzụ ọhụrụ » Ụgbọ ala anyanwụ